September 2018 – @mmunited
မိတ်ဆက် 1up ဆိုတာကတော့ vote တွေအကုန်လုံးက တူညီတဲ့အခွင့်အရေးရမဲ့ curation system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကို ပံ့ပိုးပေးမဲ့သူတွေကို cruation ဆုလာဒ်တွေ ပိုမိုရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် SMT ကို သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ airdrop နဲ့ bounty တွေကနေ တစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကစပြီး @steem-1up အကောင့်ကနေပဲပိုစ့်တွေ တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ @utopian-1up အကောင့်မှာ follower ၅၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒိ အကောင့်ကို အနားပေးပြီး ဒီအကောင့်ကနေပဲ ပိုစ့်တွေ တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steem ဈေးတွေကျနေတဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ 1up ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ 4000 Steem …
fundition steem steempress
Project Prometheus Week #6 update
I will also write this post in burmese language.ပြီးခဲ့တဲအပတ် ပိုစ့် payout ကတော့ 0.81 ရှိပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာကတော့ @kiwibot,@cryptowithincin, @moonbot, @jumbot တွေဆီကနေ တစ်လစာ subscription service ရယူထားပါတယ်။ @minnowpowerup ဆီကနေ ၂၉ ရက် subscription service ရယူထားပါတယ်။ @inconboost နဲ့ @steemit builder ဆီကနေ lifetime service ယူထားပါတယ်။ @accelerator နဲ့ @steem-ua ဆီမှာ SP delegate လုပ်ထားပါတယ်။ အခြား discord upvote service တွေလဲ ယူထားပါတယ်။ @upvoteshares ဆီကနေလဲ 1 share ဝယ်ထားပါတယ်။ …
My thought about Steemmonsters
I want to writeapost about Steemmonsters. @onetin84 encourage to to write this post. Here is his post: https://steemit.com/steemmonsters/@onetin84/steem-monster-card-giveway-1up-fundraiser-post-for-gold-foil-haunted-spirit-bonus-cards-about-usd30 Steem Monsters isathoughtful strategy and resource management game built on blockchain technology. Splinters is like tribes. I cannot wait to play but they are still building the story and background for each character and …
My Entry for Pat It Forward Curation contest – Week 25